Black Hole (တွင်းနက်) | HapEye
Black Hole (တွင်းနက်)
Black Hole (တွင်းနက်) ဆိုတာအာကာသထဲမှာရှိတဲ့ အလွန်ဆွဲအားပြင်းတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဲအားကြောင့် အလွန်မြန်တဲ့အလင်းတောင် ပြန်မထွက်လာနိုင်ပါဘူး။ဒြပ်ထုကိုသေးငယ်အောင်ဖြည့်ညစ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ဆွဲအားကအလွန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ကြယ်တွေသေဆုံးတဲ့အခါ ထိုကဲ့သို့ Black Hole များကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
Black Hole ထဲဝင်သွားတဲ့အလင်းတွေဟာပြန်ကန်ထွက်မလာနိုင်တဲ့အတွက်လူတွေက Black Hole တွင်းနက် ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။လွယ်လွယ်ကူကူမတွေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အထူးကိရိယာတွေပါဝင်တဲ့ အာကာသတယ်လီစကုတ်ကြီးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တော့ Black Hole ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အာကာသတယ်လီစကုတ် ဟာ အခြားကြယ်များထက်ထူးခြားစွာပြုမူလှုပ်ရှားနေတဲ့ Black Holeနားကကြယ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှု့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Black Hole ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးလဲ?Black Hole များဟာ ကြီးမားတဲ့ Black Hole ရှိသလို သေးငယ်သောBlack Hole များလည်းရှိပါတယ်။‌သေးငယ်တဲ့ Black Hole များဟာ အက်တမ်တစ်လုံးမျှအရွယ်ထိရှိနိုင်ကြောင်း သေးငယ်‌ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ယူဆကြပါတယ်။ အဲဒီ Black Hole ဟာ အလွန်သေးငယ်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ထုထည်သိပ်သည်းမှုဟာ တောင်ကြီးတစ်ခုစာလောက်ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ် Black Hole တွင်းနက်တစ်မျိုးကို “Stellar” လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒြပ်ထုဟာ နေရဲ့ဒြပ်ထုထက် အဆ 20 အထိ‌တောင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာကြီးတည်ရှိတဲ့ Milky Way လို့ခေါ်တဲ့ဂလက်ဆီထဲမှာတင် အဲဒီ Stellar Black Hole တွေအမြှောက်အများရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အကြီးဆုံး Black Hole တွင်းနက်များကိုတော့ “supermassive” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ Black Hole တွင်းနက် များဟာ နေပေါင်း ၁ သန်းကျော်ထိစုပေါင်းထားတဲ့ပမာဏ‌လောက်ကြီးမားတဲ့ထုထည် ရှိပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကြီးမားတဲ့ ဂလက်ဆီ တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ ကြီးမားတဲ့ Black Hole တွင်းနက် “Supermassive” တစ်ခု ပါ၀င်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ Milky Way ဂလက်ဆီရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ Black Hole တွင်းနက် “Supermassive” ကိုတော့ Sagittarius A လို့‌ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ Black Hole ရဲ့ထုထည်သိသည်းမှုဟာ နေအလုံးပေါင်း4သန်းခန့်နှင့်ညီမျှပါတယ်။
Black Holes တွေက ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲ?သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ သေးငယ်တဲ့ Black Hole များဟာ စကြဝဠာစတင်ဖြစ်ပေါ်ကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။Stellar Black Hole တွေကတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ အလယ်ဗဟိုဟာ သူ့အလိုလို ပြိုကျ ပြိုကွဲလာသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်‌ပေါ်လာ‌ရင် ဆူပါနိုဗာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
စူပါနိုဗာဆိုတာကတော့ ကြယ်တစ်ပိုင်းကို အာကာသထဲသို့ ပေါက်ကွဲစေတဲ့ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ကြယ်ဖြစ်ပါတယ်။ “Supermassive” Black Hole တွေကတော့ ဂလက်ဆီတွေဖြစ်ပေါ်ဖွဲစည်းကတည်းက တချိန်တည်းတည်ရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Black Holes တွေက “အနက်ရောင်” ဆိုရင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဲမှာရှိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?Black Hole ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဲအားက အလင်းအားလုံးကို သူ့ရဲ့အလယ်ကိုဆွဲယူစုတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ဆွဲငင်အားဟာ တွင်းနက်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ကြယ်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့များအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှု့ရှိလည်းဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Black Hole သည် ကမ္ဘာမြေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသလား? Black Hole တွင်းနက်များဟာ ကြယ်များ၊ လများနှင့် ဂြိုလ်များကို စားသုံးစုပ်ယူ‌ပေမဲ့ အာကာသထဲမှာ လှည့်ပတ်သွားလာမနေပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေတည်ရှိတဲ့ နေအဖွဲအစည်း ဆိုလာ system နဲ့ နီးနီးနားနားမှာ Black Hole တွင်းနက် မရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာမြေဟာ တွင်းနက်ထဲကို ကျရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။နေနဲ့တူတဲ့ ဒြပ်ထုတစ်ခုရှိတဲ့ Black Hole ဟာ နေရဲ့နေရာကို ရောက်သွားရင်တောင် ကမ္ဘာကြီးက ပြုတ်ကျ တိုးဝင်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာနှင့် အခြားဂြိုလ်များဟာ ယခုအချိန်တွင် နေကို လှည့်ပတ်နေသလိုပဲ Black Hole တွင်းနက်ကို လှည့်ပတ်‌နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဟာ ဘယ်တော့မှ တွင်းနက်အဖြစ် ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေဟာ တွင်းနက်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လည်းကြီးမားတဲ့ကြယ်မဟုတ်သေးပါဘူး။
NASA က Black Holes ကို ဘယ်လိုလေ့လာနေလဲ? Black Hole တွင်းနက်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်အတွက် NASA ဟာ အာကာသအတွင်း သွားလာနေတဲ့ ဂြိုလ်တုများနှင့် တယ်လီစကုပ်များကို အသုံးပြုပြီး‌လေ့လာနေပါတယ်။အဲဒီ အာကာသယာဉ်များဟာ စကြဝဠာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းများကို သိပ္ပံပညာရှင်များအား ဖြေဆိုရာတွင် ကူညီပေးပါတယ်။
Black Hole (တွင်းနက်)ကို အာကာသနှင့်သိပ္ပံ ဗဟုသုတ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။